gastronomy - ခရီးသွားသတင်း | ခရီးသွားသတင်း (စာမျက်နှာ ၂)
မက်ဒရစ်မှာဘယ်မှာစားရမလဲ။ မြို့ထဲရှိအကြံပြုထားသောစားသောက်ဆိုင် ၉ ခု
မက်ဒရစ်တွင်အစာအိမ်နှင့်ဆိုင်သောစီးပွားရေးဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းချက်ကျယ်သည်။ ဒီ post မှာတော့မင်းကိုမြို့ထဲကအကြံပြုထားတဲ့စားသောက်ဆိုင် ၉ ခုကိုငါပြောပြမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ငါးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုအဓိကထားသော Basque Basque gastronomy ၏အရသာအရှိဆုံးဟင်းလျာများအကြောင်းပြောပါမည်။
သြစတြီးယား gastronomy ၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများ၊ သင်ကြိုးစားရမည့်ဟင်းလျာများကိုသင့်အားပြသပါသည်။
Huesca တွင်စားရန်အကောင်းဆုံးနေရာများမှာ San Lorenzo နှင့် Coso Alto တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး El Tubo ဟုလူသိများသည်။
စပိန်၏ရိုးရာအစားအစာသည်ကျယ်ပြန့်ပြီးမတူကွဲပြား။ အရသာရှိသည်။ အဓိကအားဖြင့်မတူညီသောပံ့ပိုးမှုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ပြင်သစ်အစားအစာသည်အရည်အသွေးနှင့်သန့်စင်မှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်တူသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံးသော gastronomies တစ်ခုဖြစ်သည်။
မက်ဒရစ်ရှိ San Miguel Market က
Mercado de San Miguel သည်အရည်အသွေးကောင်းသည့် gastronomic နေရာဖြစ်သောမက်ဒရစ်မြို့၏အလယ်တွင်သင့်အားကမ်းလှမ်းနိုင်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
အစားအစာနှင့်စပ်လျဉ်း။ မက္ကဆီကိုတွင်“ ဝမ်းဗိုက်အပြည့်၊ ကိစ္စမရှိပါဘူး
အီတလီ၏ gastronomy တွင်လူကြိုက်များမှုနှင့်အတူအရသာရှိသည့်အခြားသူများနှင့်အတူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအစားအစာများရှိသည်။
ပြင်သစ်တွင်ဒဏ္legာရီဆန်သော gastronomy ရှိသည်၊ သင်မြည်းကြည့်သောအခါသင့်ကိုကြိုဆိုရန်ဆန္ဒရှိသည်ထက်ပိုသည်။ အကောင်းဆုံး pastry ကနေရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့တောင့်တင်းတဲ့သစ်သီးတစ်လုံးအထိသင်ပြင်သစ်ကိုသွားမလား။ ပြတိုက်များနှင့်ရဲတိုက်များအပြင်၎င်း၏ gastronomy လည်းရှိသည်။ အဆိုပါ fracnesa ထမင်းချက်ချိုမြိန်ခြင်းနှင့်ငန်အတွက်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ စားရန်!
Basque pinchos, တစ်ခုလုံး gastronomic အစဉ်အလာ
Basque pinchos သည် beautiful ည့်သည်များစွာအားလှပသော Basque နိုင်ငံသို့သွားရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောဆွဲဆောင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရသာရှိသောအစားအစာများကိုအရသာငယ်များဖြင့်မြည်းစမ်းနိုင်သည်။
မက်ဒရစ်တွင် Neapolitan မဟုတ်သောပီဇာစားရန်ပီဇာငါးခု
နပိုလီယံ၏အခွင့်အလမ်းနည်းဆုံးလူ ဦး ရေ၏ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကိုအေးဆေးစေရန်မွေးဖွားလာသည့်အစားအစာသည်လွန်သွားသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်၊ ခရစ်စမတ်အကြိုညဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းရှိလူပေါင်းသန်း ၂၂၀၀ ခန့်သည် ...
စပိန်နိုင်ငံတွင်ပုံမှန်ခရစ်စမတ်သကြားလုံး ၁၀ ခု
ကျနော်တို့ခရီးသွားတဲ့အခါတိုင်းပြည်ကိုသူ့သမိုင်း၊ ရိုးရာအစဉ်အလာ၊ အနုပညာဒါမှမဟုတ်အနုပညာတစ်ခုကနေတစ်ဆင့်သိကျွမ်းဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
León, Gastronomy ၏စပိန်မြို့တော် 2018
León၊ စပိန်နိုင်ငံ၏ Gastronomy 2018 ၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဆက်ခံ Huelva ဖြစ်သည်။ Leónတွင်မည်သည့်ထုတ်ကုန်များသည်ထူးခြားသနည်း။
မက်ဒရစ်ရှိအကောင်းဆုံးနွေရာသီ ၁၆ ခု
နယူးယောက်၌စားရန်လာသည့်ဂန္ထဝင်မှာအစားအစာထရပ်ကားဖြစ်သည်။ လမ်းအစားအစာ, ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာ့အရသာအားလုံးနှင့်ကောင်းသောစျေးနှုန်းများနှင့်အတူ။
မက်ဒရစ်မှာ vermouth ကိုဘယ်ကကြောင်ကြောင်လိုသောက်ရမလဲ။
မက်ဒရစ်တွင်ခဏတာနေထိုင်ခဲ့သူမည်သူမဆို vermouth သို့မဟုတ် vermouth သောက်သုံးခြင်းကို ...
သင် Buenos Aires တွင်မကြိုးစားနိုင်သည့်အစားအစာ ၅ မျိုး
Buenos Aires? စားရန်! ပြောင်းရွှေ့လာသောလူတစ် ဦး အနေနှင့်အစားအစာများအားလုံးကိုကိုယ်စားပြုသည်၊ သို့သော်မလွဲနိုင်သောဤငါးချက်ကိုထောက်ပြသည်။
မနေ့ကမင်းတို့အား Andalusian ပြည်နယ် ၄ ခုမှစားနပ်ရိက္ခာများယူဆောင်လာပါက၊ ကျန်ရှိနေသေးသောလေးခုဖြစ်သော Malaga၊ Granada, Almeríaနှင့်Jaénတို့ကိုမင်းတို့အားယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။
Andalusia (I) သို့ gastronomic လည်ပတ်မှုများ
ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာမင်းတို့ငါတို့ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ Andalusia ရဲ့အနံ့အရသာကိုဖော်ပြပေးပါတယ်။ Huelva, Cádiz, Córdobaနှင့် Seville တို့၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများကိုဤနေရာတွင်လေ့လာပါ။
သင်သည်သင်၏ခရစ်စမတ်ညစာစားပွဲ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအပြီးသတ်ရန်နှစ်သက်သူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၀၀% gastronomic ဆောင်းပါးကိုတင်ပြသည်။
Croqueteros, ဘယ်မှာမက်ဒရစ်အတွက်အကောင်းဆုံး croquettes စားရန်?
Croquette စပိန် gastronomy အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးခဲဖွယ်စားဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မူလအစရာစုနှစ်များစွာက ...
စပိန်နိုင်ငံသို့သင်သွားချင်သော g ကောင်းတဲ့စျေးကွက် ၄ ခု
မြို့ကြီးများ၏စားနပ်ရိက္ခာစျေးကွက်ဟောင်းများသည်အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ gastronomic နေရာများဖြစ်လာသည်။
အားလုံးအရသာနှင့်အရောင်, ဒီအရသာပီရူး gastronomy ဖြစ်ပါတယ်
ပီရူး gastronomy သည်ပေါင်းစပ်မှု၏ရလဒ်ဖြစ်သောကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်မတူကွဲပြားသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
နယူးယောက်သို့ခရီးထွက်နေပါသလားသို့မဟုတ်၎င်းသည်သင်၏အိပ်မက်ဖြစ်ပြီးယင်းကိုသဘောပေါက်ရန်သင်သွားနေသလား။ ကောင်းတယ် နယူးယောက်ကအကောင်းဆုံး ...
အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်မက်ဒရစ်တွင်5Gourmet စျေးကွက်
Easter မှာ Torrijas ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့်ကြိုက်ရတာလဲ။
New York City တွင်ထိပ်တန်းဂျပန်စားသောက်ဆိုင် ၁၀ ခု
နယူးယောက်ရှိအကောင်းဆုံးဂျပန်စားသောက်ဆိုင် ၁၀ ခုကိုရှာဖွေပါ။ သင်ဆူရှီနှင့်အခြားဂျပန်အစားအစာများ၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများကိုကြိုက်ပါက၎င်းကိုမလွတ်ပါနှင့်။
ကိုပင်ဟေဂင်ရှိ Carlsberg ဘီယာစက်ရုံ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Carlsberg ဘီယာစက်ရုံသို့လည်ပတ်ရန်ကိုပင်ဟေဂင်သို့သွားသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်၊ သမိုင်းကြောင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်အရသာအရသာတို့ကိုသိသောလမ်းညွှန်ခရီးစဉ်
Andalusian အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ပျောက်ဆုံးရသည့်အကြောင်းရင်းများ (၁)
Andalusian Western Coast (I) တွင်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးရန်အကြောင်းပြချက်ပေးသင့်သည်ဟုသင်ထင်ပါသလား။ ဒီမှာအနည်းငယ်နှင့်မနက်ဖြန်ပိုကောင်းနှင့်ပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။
ဒီ post မှာတော့ဂိုင်ယာနာ၏အစာအိမ်နှင့်ဆိုင်သောအချိုပွဲအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့မီးဖိုချောင်၏ပထမအဆင့်ကိုအပြီးသတ်ပြီးခဲ့သည်။
Mafe သည်ဂမ်ဘီယာနှင့်အနောက်အာဖရိကရှိလူသိများသောဟင်းပွဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြက်နှင့်မြေပဲပေါ်အခြေခံသည့်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်သည်။
ချိုသောသွားနှင့်အတူသူတို့အားများအတွက်ကျူးဘား dulce de leche alfajores
ကျူးဘား alfajores သည်ဤကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံ၏အရသာအစားအစာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယူဆောင်လာနိုင်သော gastronomic ပျော်မွေ့စရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Cherna ဟင်းချို, အစာစားရန်စတင်ရန်အရသာနည်းလမ်း
ငါးသည်ကျူးဘား gastronomy တွင်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်။ ၎င်း၏ပြင်ဆင်မှုများစွာမှာအရသာရှိသော Cherna ဟင်းချိုဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး Frankfurt စားရန်ဘယ်မှာ
သင်၏အရသာနှင့်အိတ်ကပ်မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအစာစားရန်အခြားရွေးချယ်စရာများရှိသောကြောင့် Frankfurt ကလူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်စေသည်။
The View, ဆုံလည်စားသောက်ဆိုင်
Times Square ရှိ Marriott Marquis Hotel တွင်နယူးယောက်ရှိတစ်ခုတည်းသောလည်ပတ်နေသောစားသောက်ဆိုင် The View ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်
ထိုင်းနိုင်ငံ၏အခြေအနေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုအမြဲတမ်းတရုတ်နှင့်အိန္ဒိယတို့ကသိသိသာသာထင်ရှားခဲ့သည်။ ဒီဆက်နွယ်မှုရဲ့အသီး ...
ပက်ထရာ၊ ကျောက်မြို့ (IIIa)
ငါတို့ Petra သို့ငါတို့ခရီးစဉ်၏တတိယအဆင့်သို့ရောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် gastronomy ကိုသိရန်သာဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့မီးဖိုချောင်များ - အယ်လ်ဂျီးရီးယား (၁)
ကျွန်တော်တို့ဟာတိုင်းပြည်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်မြို့တစ်မြို့ကိုတစ်ထောင်ပြီးတစ်လမ်းစီနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ တစ်နည်းနည်းနဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့သိနိုင်ပါတယ်၊ အကောင်းဆုံးကတော့၊
ဗာနူးတူနိုင်ငံ၊ ပျော်ရွှင်သောနိုင်ငံ (၃)
Puerto Rico မှာဘာစားရမလဲ
Puerto Rico, Creole Creole အစားအစာများ၏အစစ်အမှန်အစွမ်းသည်ငှက်ပျောများဖြစ်သောမရှိမဖြစ်ပါဝင်သည့်အရာနှစ်ခုအပေါ်အခြေခံသည်။
Chiang Rai ၏အရသာနှင့်အစာစားခြင်း
စင်ကာပူရှိထိပ်တန်းစားသောက်ဆိုင် ၅ ခု
၁- ဝိန်း Fort မှာရှိတဲ့ပုလွေ - ဒါဟာအလွန်ရင်ခုန်စရာကောင်းပြီးကိုလိုနီခေတ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုပါ။ သင်သိရန်ကိုချစ်ပါလိမ့်မယ် ...
Acapulco ရှိဘားများ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်နိုက်ကလပ်များ။
Acapulco သည် ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းကခရီးသွား and ည့်သည်များနှင့်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဗာတီကန်ပြီးလျှင်မိုနာကိုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအသေးငယ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေသိပ်သည်းမှုမှာပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သည်။
Las Vegas, "အပြစ်၏မြို့" (III ကို)
ခရီးစဉ်တိုင်း၏အဓိကအစားအစာဖြစ်သောဒေသဆိုင်ရာအစားအစာကိုကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးကတကယ်မသိဘူး ...
တိုကျို, "ထို microchip ၏အင်ပါယာ" (IIIa)
Beginners for Saigon (၁) အချိုရည်များသောက်ခြင်း။
Saigon သည်သဘာ ၀၀ န်းကျင်ညံ့ဖျင်းခြင်းအတွက်ဂုဏ်သတင်းအမြဲရှိသည်။ ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်တွေတောင်မှသူမကိုဟိုကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါ ...
4 ရက်အတွင်း Santorini ရဲ့အကောင်းဆုံး
မြို့တော် Thira သည် Aegean ရှိအလှဆုံးနှင့်ထူးခြားသည့်မြို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုတည်ဆောက်ပြီး ...
ကျိုတို၏ gheisha ခရိုင် Gion ရှိ kaiseki ညစာ
ဒီခရီးစဉ်ရဲ့စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုကတော့ Gion, kaiseki ပုံစံညစာ…